I-3050-4000mAh Factory, abaxhasi - i-China 3050-4000mAh abavelisi
Amandla ombane aphezulu 3.7V 4000mAh 606090 ibhetri ye-li-po enokuthi isetyenziselwe isithethi seBluetooth, iithoyi, iBhanki yamandla
Ibhetri ye-PLM-606090 3.7V 4000mAh esebenzisekayo isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po K86 3400mAh 3.7V ibhetri yesithethi seBluetooth, iithoyi, iRobhothi, iselfowuni, iPOS, i-Express Smart Mini Printa
Ukutshaja kwakhona i-PLM-K86 3.7V 3400mAh ibhetri isebenzisa eyona nto inamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po 36-DC3800MA 3800mAh 4.2V Iseli yeBhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, iRobot ye-elektroniki, iPOS
Ibhetri ye-PLM-36-DC3800MA ye-4.2V 3800mAh isebenzisa ezona zixhobo zihle kakhulu ezinomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po 964674 3.7V 4000mAh Iseli yebhetri yesithethi seBluetooth, iithoyi, iBhanki yamandla
Ukutshaja kwakhona i-PLM-964674 3.7V 4000mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Iindlela ezimbini Irediyo M2 3.8V 4000mAh Polymer Lithium Ibhetri iphinde iqokelele ukuphinda ibhetri yeMicrosoft Talk Radio, Umatshini wokubonisa ubungqina
Ibhetri ye-PLM-M2 engu-3.8V 4000mAh ephinda isebenze yeyona nto ibalaseleyo inesikhundla esiphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Iinkcukacha zoMveliso: Ukusetyenziswa kwamathoyizi, izinto zekhaya, izixhobo zeTekhnoloji yoMthengi: Isiqinisekiso se-PLM: Inombolo yeModeli ye-MSDS: I-PLM- 805080 Indawo yeMvelaphi: iGuangdong, China Isisindo: 45g / PC Uhlobo lwebhetri: Uhlobo lwebhetri enokulungiswa ngebhetri: 7.4V amandla: 4000mAh Ubungakanani bebhetri: 8.0mm * 50mm * 80mm Warranty: Ukusetyenziswa kweenyanga ezili-12: isithethi seBluetooth, iithoyi, iimveliso zombane, ubomi bebhanki yamandla: 1000Times rate Discharge: 4.0A Package: Individual Box Package Multiple Protection: 1.Dual MOS octagonal p .. .
Iinkcukacha zeMveliso: Isicelo: Iithoyi, izixhobo zasekhaya, igama leBrand Electronics Brand: Isiqinisekiso sePLM: Inombolo yeModeli yeMSDS: PLM- 102662 Indawo yokuQala: Guangdong, China Ubunzima: 75g / PC Uhlobo lwebhetri: Ibhetri yePolymer ehlawulekayo kwakhona: 3.7V Amandla: 3200mAh Ubungakanani bebhetri: 10mm * 26mm * 62mm Warranty: Ukusetyenziswa kweenyanga ezili-12: isithethi seBluetooth, iithoyi, i-POS, ubomi bekhamera ye-Cycle: I-1000Times inqanaba lokukhutshwa: I-3.2A Iphakheji: Ibhokisi nganye yePakethi yePakethe yokuKhuselwa okuninzi: 1.Ibhodi ekhuselekileyo yeMOS octagonal 2.Sho. ..